Mamaly ny lehiben’ny tafika Thailandey ilay mpikatroka Hong Kong Joshua Wong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2019 5:11 GMT
Ilay mpikatroka Joshua Wong mihazona taratasy fanangonan-tsonia. Sary avy amin'ny pejy Facebookn'ny inmediahk.net.
Avy amin'ny Prachatai, tranonkala fampahalalam-baovao tsy miankina any Thailandy ity lahatsoratra nasiam-panovana ity, ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty. Tamin'ity tafatafa ity dia namaly ny fiampangana nataon'ny lehiben'ny tafika Thailandey Apirat Kongsompong i Joshua Wong hoe nitsidika an'i Thailandy imbetsaka izy ary nandrisika ny tanora Thailandey hanao fihetsiketsehana.
“Raha ao anatin'ny ady mangatsiaka vaovao isika, dia Berlin vaovao i Hong Kong.” Nolazain'ny jeneraly Apirat Kongsompong, lehiben'ny tafi-panjaka Thailandy tamin'ny lahateny ho an'ny mpianatra miaramila tamin'ny 11 Oktobra 2019 ny horonan-tsary misy an'i Joshua Wong manome ity fanambarana ity.
Nandritra ny lahateny, dia nilaza i Apirat fa very faritany in-14 i Thailandy ary niangana tamin'ny ady mangatsiaka, saingy ankehitriny kosa dia miatrika fanamby ara-piarovana, voarakitra ao anatin'ny horonantsary izy. “Tiako ny miato kely amin'ny sarin'ity olona ity mandritra ny fotoana fohy. Ity sary ity dia mampiseho an'i Joshua Wong, mpitarika nilaza hoe “Raha ao anaty ady mangatsiaka vaovao isika, dia Berlin vaovao i Hong Kong”. Tsy nilaza izany aho, Andriamatoa Wong no nilaza izany », hoy i Apirat.
Avy eo nanao fampitahàna teo amin'ny tanora Thailandey sy Hong Kong ny jeneraly Apirat ary niampanga an'i Joshua Wong ho miezaka mampifandray azy sy i Thanathorn Juang fandraruangkit, ilay mpitarika ny antoko mandroko mankany amin'ny Hoavy.
Voalohany dia nosy i Hong Kong. Ankehitriny dia ampahany iray an'i Shina izy. Mety efa tany Hong Kong ny rehetra mipetraka eto, tanàna mahaliana sy tanàna iray fiantsenana i Hong Kong. Saingy manontany aho hoe inona no nitranga satria tsy misy olona maniry ho any Hong Kong ankehitriny? Saingy nisy olona nankany, naka sary ary nandefa izany hojerentsika.
(Nilaza i Thanathorn Juanguokruangkit tany am-boalohany fa nankany amin'ny Fetibe Open Future nokarakarain'ny Economist tany Hong Kong izy, ary nihaona tamin'i Joshua Wong ary niresaka fohy taminy nandritra ny 5 minitra. Tafaporitsaka ny sary nalaina tamin'izany fotoana izany, ka nitarika tsikera avy amin'ny olona maro fa tsy fitiavan-tanindrazana sy hetsika fitsabahana izany.)
[VAKIO: Ho fanampin'izany, dia vakio ny fandrakofana manokana nataon'ny Global Voices momba ny fiakaran'ny herin'ny tafika Thailandey taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014 sy ny fampielezan-kevitra mitohy ho amin'ny fanavaozana demaokratika nataon'ireo hery politika isan-karazany, ao anatin'izany ireo vondrona mpianatra sy tanora mpikatroka]
Nitohy nandritra ny minitra maromaro ny resaka nataon'i Apirat momba an'i Hong Kong ,nanao fanambarana maro izy:
“Tonga tany Thailandy i Joshua Wong, tsy fantatro hoe impiry. Iza no nihaona taminy? Karazan'olona manao ahoana no nifanena taminy? Rehefa nihaona izy ireo, dia inona no tetipanorona? Niray tetika hanao zavatra ve izy ireo? Fanampin'izay, misy ihany koa ny fitsidihana izay toa fanentanana, fanohanana. ”
“Zava-dehibe fa tanora daholo ny olona nivoaka. Te hanontany ny mpianatra tanora aho hoe indray andro any raha misy olona diso fanentanana, mpanakorontana sy mpanakotaba, olona izay mampiasa ny haino aman-jery sosialy, olona mampiasa propagandy, tonga hanasa ny atidohanao mba hanao tahaka ny ao Hong Kong, hanao izany ve ianao? Raha jerena ny sary misy ny zava-nitranga tamin'ny fandoroana ny tanàna tamin'ny taona 2010 – 2011, tsapako fa mora tohina ny mpianatra tanora ary tsy maintsy ho olom-pirenena matanjaka mila mahalala ny marina.
Nanosika ny Vaomiera parlemantera ho an'ny fiarovam-pirenena hiantso an'i Apirat mba ho tonga hanatrika fakàna am-bavany ilay lahateny. Tian'ny vaomiera atao fakàna am-bavany tsiambaratelo izany. Na izany aza, zava-dehibe ihany koa ny valin-teny avy amin'i Joshua Wong. Nifandray tamin'i Joshua Wong tamin'ny alàlan'ny mailaka ny Prachatai ary nahazo raki-peo 10 minitra izahay namaliany ireo fanontanianay momba ny toe-draharaha farany eto Hong Kong.
Prachatai (P): Azonao omena vaovao farany momba ny fihetsiketsehana ao Hong Kong ve?
Joshua Wong (JW): Mbola nitohy nandritra ny efa-bolana mahery ny fihetsiketsehana tao Hong Kong, izay mampiseho ny hatezeranay sy ny làlanay ho amin'ny fifidianana sy demaokrasia malalaka. Rehefa mamadika ny tanàna manerantany ho fanjakan'ny polisy ahitana herisetram-bahoaka ny governemanta Hong Kong, dia hitarika vahoaka bebe kokoa ho amin'ny firaisankina izany.
P: Nanonona anao imbetsaka ny Lehiben'ny Tafika Thailandey tato ho ato. Nambarany fa efa ampahan'i Shina i Hong Kong. Afaka manome anay ny hevitrao ve ianao?
JW: Na dia eo ambany fifehezan'i Beijing aza i Hong Kong, dia tokony mendrika ny fizakan-tenanay izahay ary izany no fampanantenan'ny fanambarana miaraka nataon'ny Shinoa sy ny Britanika. Izany no fifanarahana iraisam-pirenena voasoratra ao amin'ny Firenena Mikambana. Maniry aho mba hahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fiantohana [ny] fahalalahan'ny vahoaka sy ny demaokrasia ary ny zon'olombelona ny Lehiben'ny tafika Thailandey. Ireo no soatoavina manerantany inoanay.
P: Nilaza izy fa mijaly noho ny fihetsiketsehana i Hong Kong ary nangataka ny tanora Thailandey mba tsy hanao toy izany. Afaka manome hevitra momba izany ve ianao?
JW: Mijaly noho ny fandrahonana avy any Beijing i Hong Kong. Ary rehefa nangataka ny tanora Thailandey mba tsy hanao toy izany ny Lehiben'ny tafika, ny hany valinteniko dia raha toa ka manao toy izany ny governemanta any Thailandy, dia hanao tahaka ny nataon'ny tanora Hong Kong tao anatin'ny efa-bolana lasa ny tanora any Thailandy. Noho izany dia miankina amin'ny manampahefana izany fa tsy miankina aminay.
P: Nilaza ny Lehiben'ny tafika Thailandey fa efa tany Thailandy imbetsaka ianao ary tsy fantany hoe iza no nihaona taminao ary inona no fandaharam-potoananao. Efa nanao fitsidihana tany Thailandy ve ianao?
JW: Mbola tsy nitsidika an'i Thailandy aho tato anatin'ny taona vitsy, indrindra taorian'ny nitazonana ahy tao amin'ny seranam-piaramanidina Bangkok ary nampidirin'ny governemanta Thailandey lisitra mainty tamin'ny taona 2016. Koa vaovao sandoka izany. Ary fiampangana sandoka hilazana fa efa tany Thailandy matetika aho. Ny hany dia nataoko tany Thailandy dia [fony aho tamin'ny 10 taona] niaraka tamin'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreniko tany Bangkok ary izay ihany.
P: Eo ambanin'ny fanafihana i Thanathorn Juangturuangkit, mpitarika ny mpanohitra ao Thailandy noho izy naka sary niaraka taminao vao haingana sy niresaka taminao nandritra ny 5 minitra. Inona no hevitrao momba izany?
JW: Heveriko fa tsy mitombina izany satria na dia mitovy hevitra aza izahay ary mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fahalalahana sy ny demaokrasia, dia tsy midika izany fa tsy afaka manana fifandraisana izahay. Ary mampiseho fotsiny ny fampihorohoroana fotsy sy ny fomba tsy fanajan'ny governemanta Thailandey ny feon'ny tsy mitovy hevitra, sy ny tsy fanajana ny feon'ny fifidianana malalaka fotsiny izahay.
P: Manao ahoana ny ho avin'i Hong Kong?
JW: Ary tokony ho eo an-tanan'ny vahoaka Hong Kong ny hoavin'i Hong Kong. Mendrika hanana zo hamaritra ny hoavinay izahay fa tsy fehezin'ny manam-pahefana. Manantena fotsiny izahay fa afaka ho toerana miaraka amin'ny fahafahana sy ny demaokrasia i Hong Kong. Ary afaka ny ho vahoaka [izay] mamaritra ny hoavinay manokana rehefa mijaly i Hong Kong. Raha ny marina, dia mpikatroka telo arivo mahery no nosamborina, ary miatrika fanorisorenana ara-nofo sy fampijaliana any amin'ny biraon'ny polisy ireo mpikatroka. Tsy ny mpanao fihetsiketsehana fotsiny ihany, fa samborina ihany koa ireo mpiasa mpamonjy voina, mpanao gazety sy mpitsabo mpanampy. Izay mampiseho fotsiny ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.